Fanarenana angona, Famerenana rakitra ary lozisialy fanarenana mailaka an'i DataNumen
Vokatra rindrambaiko fanarenana data
Manome rindrambaiko fanarenana data azo loka izahay ho an'ireo rakitra MS Office, fanarenana mailaka, fisie sy tahiry backup, tahiry, sary ary antontan-taratasy ary maro hafa.
Lisitry ny vokatra feno
Archive / Backup
Tongasoa eto DataNumen
DataNumen no mpitondra an'izao tontolo izao amin'ny teknolojia fanarenana data. Manome vahaolana fanarenana data izahay, anisan'izany ny vokatra rindrambaiko fanarenana angon-drakitra nahazo loka, serivisy fanarenana angon-drakitra matihanina ary kit kit fampandrosoana rindrambaiko (SDK) ho an'ny mpamorona.
Fandaharana tena tsara, ary fanohanan'ny mpanjifa tena tsara (eo amin'ny fanohanan'ny mpanjifa tsara indrindra efa niainako).
Nampiasa ny Outlook 2010 tamin'ny farany aho
Nampiasa ny Outlook 2010 tamin'ny solosainako farany aho, izay nandefa Windows 7. Maty io solosaina io, na dia soa ihany aza, namboariko ny rakitrao rehetra (ao anatin'izany ny fisie Outlook pst) amin'ny kapila ivelany. Saingy hadinoko ny teny miafina momba ny fisie pst misy encrypted misy mailaka 14.5 GB sy kambana (mailaka manodidina ny fito taona, ny sasany manan-danja indrindra amiko).
Nampidiniko ny kinova fitsapana an'i DataNumen Outlook Password Recovery (tsy tokony ho diso amin'ny fanamboarana Outlook na Outlook Drive Recovery) sy ny starTed ny fizotry ny fanarenana, saingy nofoanana ny fandidiana raha vao nanomboka izy mba hahafahako mandika ilay rakitra pst voafafa amin'ny toerana hafa mba hahazoana antoka fa manana backup aho (manadino fa efa manana backup aho tao amin'ny lahatahiry Outlook Files). Aorian'izany dia tsy afaka nampiasa ilay kinova fitsapana intsony aho.
Novidiko ny kinova feno, saingy tsy nisy fomba hahafahako mampiditra ny ID-nako sy kaody ao anaty kinova andrana isaky ny torolàlana hanovana ny kinova andrana ho lasa kinova feno. Ka nandefa mailaka aho DataNumen. Tao anatin'ny 12 ora dia nandefa mailaka rohy fampidinana ahy ho an'ny kinova feno izy ireo, ary nanome torolàlana ahy hamafa ny kinova andrana ary hametraka ilay kinova feno.
Tsy nanana olana tamin'ny famongorana ny kinova fitsapana sy ny fametrahana ny kinova feno (kinova 1.2.1.0) aho, ary nahazo teny miafina haingana mba hidirana amin'ilay rakitra pst voahidy
Vao nihazakazaka ny fandidiana indray aho mba hahitako hoe naharitra hafiriana izany. Ny programa dia namaha ny rakitra pst ahy tao anatin'ny iray minitra sy 47 segondra.
Sendra izany, fisie pst maro hafa ao amin'ny lahatahiry Outlook Files, toa ireo rakitra voatahiry, no tsy nafenina. Tsy tadidiko ny nanafenako an'ity rakitra pst ity. Tokony hampiasa ny kinova fanandramana ianao (azonao ampiasaina indray mandeha io) hahazoana antoka fa ny rakitra pst ilainao idirana dia voahodina.
Zavatra farany tokony horesahina: Tsy azoko an-tsaina raha toa ka namoaka rakitra pst lehibe toa an'ity ity ny kinova fitsapana, na raha toa ka tsy misy ifandraisany amin'ny kinova fitsapana ny haben'ny fisie.
Mpamonjy aina ity programa ity, ary tena tsara ny fanohanan'ny mpanjifa (10 amin'ny ambaratonga 1 ka hatramin'ny 10). Vao nahavita mailaka fito taona teo ho eo aho. Tsy mampino!
Mirary soa ho anao amin'ny programa nataonao. Kely izy ireo ary manao araka izay voalaza.
Mora ny manaraka sy mahatakatra ny interface. Izaho dia
Mora ny manaraka sy mahatakatra ny interface. Miandry programa vaovao bebe kokoa avy aminao aho.
Talen'ny IT hopitaly misotro ronono
Blythewood SC, Etazonia
Ao anaty HDD (endrika miovaova indroa) dia tena fanarenana tanteraka.
Fitaovana manao izay mampanantena!
Injeniera misotro ronono
Misaotra anao nanampy.
Mety tsara ny fampiharana. OK ihany koa ny fotony.
Voahitsakitsaka i Outlook, taorinan'ny fanavaozana ny Windows ny programa Email nataoko dia nijanona tsy niasa ny Outlook. Izaho dia nampiasa datanumen vokatra hanamboarana ny mailaka
Voahitsakitsaka i Outlook, taorinan'ny fanavaozana ny Windows ny programa Email nataoko dia nijanona tsy niasa ny Outlook. Izaho dia nampiasa datanumen vokatra hamerenana mandamina ny lahatahiry mailaka ary niasa. Ny hany nataoko dia ny mihazakazaka ny programa hanamboarana ny angona, nanova ny anaran'ny rakitra ary mampandeha an'i Outlook. Presto dia niasa. Misaotra betsaka
Mahatalanjona ahy ny fahamoran'ny fampiasana sy ny fanarenana haingana ny fisie. Na eo aza izany rehetra izany, tsy mila azy intsony aho, koa nesoriko izy rehefa avy nanao rakitra roa
Mahatalanjona ahy ny fahamoran'ny fampiasana sy ny fanarenana haingana ny fisie. Na izany na tsy izany dia tsy mila azy intsony aho, koa nesoriko izy rehefa vita ny fanarenana rakitra roa.
Leioa, Bizkaia, Espana
Septambra 30, 2020
Misaotra anao noho ny vokatra ho an'ny olona kely manana olana goavana.
Nampiasaiko ny fanamboaranao ny Outlook.
Mpahay siansa misotro ronono
Septambra 21, 2020
Raha olon-kafa no nahomby toy izany.
Septambra 1st, 2020
RAR fisie 115 GB: simba tanteraka ...
Ny programa nataonao dia nanamboatra azy io tao anatin'ny 5 ora sy 33 min ...
1K misaotra !!
Aogositra 30, 2020
SDK ho an'ny Developers
Ny kitapom-pampandrosoana rindrambaiko (SDK) dia afaka manampy anao hampifangaro ireo teknolojia fanarenana data tsy manam-paharoa ao anatin'ny lozisialyo.
Lisitry ny mpanjifa feno